Barnaamijyada — Dawan News
Mosuo waa qabiilo degan dalka China gaar ahaan deegaanka Yunnan, waxayna xad la leedahay Tibet. Tirada bulshadan ayaa gaadhaysa 40,000. Caadooyinka Bulshada Shiinaha ayaa aad u kala duwan, qabiilada Mosuo ayaa leh caado iyo dhaqan ay mudo dheer ku dhaqmayeen. Doorka Gabadha ayaa ah mid muhiim ka ah iyadoo maamulaysa, […]
2,433 total views, 8 views today
Booliiska dalka Ingiriiska ee Nottingham Shire ayaa go’aamiyay in Eyda la shaqaysay Booliiska ee hawlgabka noqda loo...
Bandhigani waa mid ka mid ah xafladaha dalxiisayaashu xiiseeyaan ee ugu caansan dalka Spain. Waa xaflada ugu muhiimsan...
Noocyada hadiyadaha madaxdu isu gudbiso ayaa qaarkood yaab leyihiin, hadyadu waxay wadataa farxad laakiin haddii lagu...
Booliiska dalka Ingiriiska ee Nottingham Shire ayaa go’aamiyay in Eyda la shaqaysay Booliiska ee hawlgabka noqda loo qoro mushahar marka ay shaqada ka fadhiistaan. Mushaharkaasi ayaa lagaga bixin doona adeegyada caafimaadka ka dib markii uu hawlgab noqday. Booliiska ayaa cadeeyay in Ey kasta oo hawlgab noqda la siin doono mushahar […]
Bandhigani waa mid ka mid ah xafladaha dalxiisayaashu xiiseeyaan ee ugu caansan dalka Spain. Waa xaflada ugu muhiimsan soo dhowaynta dalxiisayaasha maxaa yeelay waxay socotaa muddo bil ah. Mudadaasi ayay dalxiisayaasha caado u leeyihin inay arkaan lo’da dib galeenka ah oo ordaya isla markaana wareegayaa waddooyinka magaalada. Dadka qaarkood oo […]
Noocyada hadiyadaha madaxdu isu gudbiso ayaa qaarkood yaab leyihiin, hadyadu waxay wadataa farxad laakiin haddii lagu soo hordhigo xayawaan nool oo aanad hore u arag waxa kugu dhacaya naxdin bilowga hore, inkasta oo ay xiiso leedahay. Sanadkii 1986 Madaxweynihii hore ee Maraykanka Ronald Reagn ayaa booqasho ku tegay dalka Indonesiya […]
Shirkadda Diyaaraddaha ee Russian Plane, ayaa markii ugu horreysay isticmaalaysa diyaarad cusub oo aad uga weyn kuwii ay hore u isticmaali jirtay, waxaana diyaaraddani noqonaysaa MC-21. Diyaaraddan oo hore loo bilaabay samaynteeda waxa la filayaa in ay dulimaadkeeda ugu horeeya samayso sannadka soo socda ee 2019, sida uu ku dhawaaqay […]
Dadka Hamiga sare leh waa kuwo tiro yar oo kooban kuwaasi ayaana dunida wax ka bedela. Thomas Adison oo ahaa ninkii soo saaray laambada laydhka wuxuu ahaa yaraantiisii wiil yar oo su’aalo badan. Thomas markii lagu daray dugsiga nasiib daro mudo badan kuma sii jirin dugsiga, Wax kasta oo loo […]
Nin Yuhuudi-Ruush ah ayaa ka dhoofayay madaarka Mosco, badhaaha Kastamka ayaa dharkiisa ka soo dhex saaray sanam yar, waxaana uu weydiiyay “ Muxu ahaa waxani “ . Yuhuudiga ayaa ugu jawaabay “ Ha odhan sidaasi, Ninkani waa Lenin , waana hogaamiyihi shuuciyadda khayrka iyo barwaaqada horseeday , waxaan u sitaa […]
January 15, 2018, 7:25 am
Culimadda dhanka caafimaadka ayaa ka digay in qofku biyo qabow ama sharaab qabow cabo ka hor cuntada ama ka dib , iyada oo lagu sheegay natiijadda daraasad arrintaasi lagu sameeyey in ay dhib u keento dheef shiidka . Irina Khristianovic oo hogaaminaysay kooxda caafimaad ee daraasaddan samaysay oo u waramaysay […]
Khubarro caafimaad oo ka tirsan maxadka Health and Science Institute ee dalka Canada ayaa caddeeyey inay jiraan faa’iidooyin badan oo uu lee yahay lawsku , kaasi oo faa’ido u leh dhinacyada Maskaxda iyo jidhka. Khubaraddan ayaa natiijadda ay soo saareen ku sheegay in faa’idada Lawsku ku xidhan tahay hadba sida […]
January 11, 2018, 5:47 am
Isaga oo jooga xafiiskiisa oo ku yaalla dabaqa sare, oo aad u fikiraya isla markaana isla maqan ayuu nin ordayaa u soo galay, kaasi oo qaylinayay, waxaana uu ku yidhi “Waar yaa Cali , inankaagii Yuusuf shil gaadhi ayuu galay, isla goobtiina wuu ku dhintay”. Ninkii isaga oo aad u […]
2,411 total views, 6 views today
January 10, 2018, 6:06 am